KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Maxkamadayntii Wariye Koronto oo dib loo dhigay - Sababta?
Maxkamadayntii Wariye Koronto oo dib loo dhigay - Sababta?
Muqdisho (KON) - Maxkamadayntii weriye Cabdicasiis Cabdinuur Koronto iyo afar qof oo kale oo loo haysto inuu ka shaqeeyay Fal fadeexeyn ah oo been abuur ah ka gadaal markii uu sheegay Haweeney iyaduna xiran kuna andacoonaysey in ay Kufsi u gaysteen Askar ka Tirsan Ciidamada dawladda ayaa markale dib loo dhigay.
Kadib markii ay Maanta hor yimaadeen Maxkamadda Gobolka Banaadir ayaa la sheegay in Maxkamadeytii dib loo dhigay lagana dhigay 5 Bishaan.
Qareenka u doodayay Cabdicasiis ayaa codsaday in dib loo dhigo dacwadda.
Wariyaha oo dacwadiisu muddo dheer soo jiitamaysey ayaa maalinimadii Arbacadii aan soo dhaafnay dib loo dhigay ka gadaal markii ay sidaa codsadeen qareenada u doodaya Wariyaha.
Hay’adda Xuquul Insaanka iyo Ururka Suxufiyiinta qaranka ayaa mudaba waxa ay codsanayeen in wariyahaas cadaaladda la hor keeno iyadoo sidoo kalena arrinta wariyaha ay ka hadleen mas;uulyiinta ugu sareysa ee Xukuumadda federaalka Soomaaliya.